ICJ မှာ NLD အစိုးရ ချေပချက်ကို NUG ရုပ်သိမ်းရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၂၂
ICJ မှာ NLD အစိုးရ ချေပချက်ကို NUG ရုပ်သိမ်းရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မူစွဲချက်အပေါ် ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ မြန်မာဘက်က အရင် ကန့်ကွက်ခဲ့တာတွေကို အခု အကုန်ပယ်ဖျက်လိုက်တာက အာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်အပြင် နောင် ကျူးလွန်မူတွေထပ်မဖြစ်အောင်လည်းပါတယ်လို့ NUG က ဆိုပါတယ်။
ဒီအတွက် ICJ မှာ အခု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အပြင်၊ ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မူခုံရုံးနဲ့ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လည်း ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလို့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင်က ဆိုပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်း အခုလိုဆုံးဖြတ်တာကြောင့် ရှေ. ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တာကိုလည်း ကိုဝင်းမင်းက မေးရာမှာ ဒေါ်ဇင်မာအောင်က အကြောင်းရင်းကို ခုလိုစရှင်းပြပါတယ်။
ICJ မှာ NLD အစိုးရ ချေပချက်ကို NUG ရုတ်သိမ်းရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
ICJ မှာ NLD အစိုးရ ခပြေခကျြကို NUG ရုတျသိမျးရတဲ့ ရညျရှယျခကျြ
လူမြိုးတုံး သတျဖွတျမူစှဲခကျြအပျေါ ICJ နိုငျငံတကာတရားရုံးမှာ မွနျမာဘကျက အရငျ ကနျ့ကှကျခဲ့တာတှကေို အခု အကုနျပယျဖကျြလိုကျတာက အာဏာသိမျးလိုကျတာကွောငျ့အပွငျ၊ နောငျ ကြူးလှနျမူတှထေပျမဖွဈအောငျလညျးပါတယျလို့ NUG က ဆိုပါတယျ။
ဒီအတှကျ ICJ မှာ အခု ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားဖို့အပွငျ၊ ICC နိုငျငံတကာရာဇဝတျမူခုံရုံးနဲ့ပါ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျဖို့လညျး ပွငျဆငျထားပွီးပွီလို့ NUG နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဒျေါဇငျမာအောငျက ဆိုပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျ NUG အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရအဖှဲ့ ထုတျပွနျခကျြအတိုငျး အခုလိုဆုံးဖွတျတာကွောငျ့ ရှေ. ဆကျဖွဈလာနိုငျတာကိုလညျး ကိုဝငျးမငျးက မေးရာမှာ ဒျေါဇငျမာအောငျက အကွောငျးရငျးကို ခုလိုစရှငျးပွပါတယျ။
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မူ ICJ စီရင်ပိုင်ခွင့် မြန်မာ ကနဦး ကန့်ကွက်ချက် NUG ရုတ်သိမ်း
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ကြောင်း စွဲဆိုအမှု ICJ စီရင်ပိုင်ခွင့် NUG အစိုးရ လက်ခံမည်
စစ်ကောင်စီလက်အောက် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ ဌာနေပြန်နိုင်ရေး အလားအလာ